China oo cambaaareesay kulanka dhexmaray Obama & hogaamiyaha Dalai Lama – SBC
China oo cambaaareesay kulanka dhexmaray Obama & hogaamiyaha Dalai Lama
Beijing:-Xukuumadda China oo horey uga dalbatay madaxweynaha dalka mareykanka Brack Obama in uu joojiyo kulanka uu la yeelanayo hogaamiyaha Tibet Dalaay ayaa ku tilmaantay in kulankii dhexmaray Obama iyo Dalal Laama in kulamada noocaas oo kale ay waxyeeleenayaan xiriirka mareykanka iyo China.
Bayaan rasmi ah oo ka soo baxay aqalka cad ee mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyn Obama uu kala hadlay Dalaya Lama baahida loo qabo ilaalinta xuquuqda insaanka gobolka Tibet.
Sidoo kale Obama ayaa markale ku celiyey in Washington ay ka aamin san tahay gobolka Tibet in uu yahay qeyb kamid ah china.
Dhanka kale Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda china ninka lagu magacaabo Hong Lii ayaa sheegay in dalkiisa uu si aad ah uga soo horjeedo kulanka dhexmaray mas’uuliyiinta rasmiga dalka mareykanka iyo Dalay Laama noocuu doonaba ha ahaadee.
Afhayeenka ayaa intaas ku daray in xukuumadda China ay ka dalbatay madaxweynaha mareykanka in uusan ku dhaqaaqin wax sababi kara in ay keento faragelin arrimaha gudaha dalka China.
Aqalka cad ee mareykanka ayaa horey u soo saaray bayaan uu ku sheegayo in Obama uu u muujin doono hogaamiyaha gobolka Tibet in mareykanku uu taageersan yahay wadahadal dhexmara mas’uuliyiinta China iyo Hogaamiyaasha gobolka Tibet si loo xaliyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac.
Sidoo kale xubno katirsan golaha congress-ka mareykanka ayaa ku dhaliilay madaxweynaha mareykanka Brack Obama sababo la xiriira soo dhoweyn la’aantiisa Dalay Laama oo ku sugan dalka mareykanka tan iyo horaantii bishan July